musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Middle East Airlines inoraira maAirbus A321XLR mana
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Rebhanoni Breaking News • nhau • Technology • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Middle East Airlines (MEA), mutakuri wemureza weRebhanoni, akasaina hurongwa hwakasimba hweana A321XLRs, zvichiita kuti ive yekutanga ndege mutengi weAirbus yazvino shanduko yemhuri inokunda yeA321neo.
Chibvumirano chinotora Middle East Airlines 'yekuunganidza imwe chete aisle odhi neAirbus kuenda ku15 A321neo ndege dzemhuri, kusanganisira 11 A321neos uye 4 A321XLRs nekutakura kutanga muna 2020. MEA inoshandisa iyo A321XLR kusimbisa network yayo muAfrica neAsia.
Iyo A321XLR inhanho inotevera yekushanduka-shanduka kubva kuA321LR iyo inopindura kudiwa kwemusika kune yakatowanda renji uye yekubhadhara, ichigadzira kukosha kwakawanda kwendege. Kubva 2023, ichaendesa isina kumboitika Xtra Yakareba Range inosvika ku4,700nm - 15% kupfuura iyo A321LR uye ne30% yakaderera mafuta kutsva pachigaro kana ichienzaniswa neyekare chizvarwa mukwikwidzi ndege. Izvi zvinogonesa vashandisi kuvhura nzira nyowani dzepasirese dzakadai seIndia kuenda kuEurope kana China kuenda kuAustralia, pamwe nekuenderera mberi nekuwedzera kusvika kweMhuri kusingasviki nendege dzakanangana neatlantic pakati penyika dzeEuropean nemaAmerica. Kune vafambi, iyo A321XLR's nyowani Airspace kabhini ichapa yakanakisa yekufamba chiitiko, nepo ichipa zvigaro mumakirasi ese neakaenzana epamusoro-nyaradzo senge pane refu-dhonza upamhi-mutumbi, nemitengo yakaderera yendege imwechete-aisle.
Iyo A320neo uye mabviro ayo ndeayo anotengesa zvakanyanya pasi-kamwe-aisle ndege yemhuri ine pamusoro pe6,500 maodha kubva kune vamwe vatengi zana kubva payakatangwa muna 100. Yakapayona uye ikabatanidza matekinoroji azvino uno, kusanganisira enjini itsva dzechizvarwa uye yeindasitiri rembudzi kabhini dhizaini, kuendesa 2010% mutengo wemafuta pachigaro chekuchengetedza chete. Iyo A20neo zvakare inopa yakakosha mabhenefiti ezvemamiriro ekunze neinenge 320% kudzikiswa muruzha tsoka inofananidzwa neyekare chizvarwa ndege.